Akụkọ - Ihe ịga nke ọma maka dentistry echi
Ezé na-etolite site na usoro mgbagwoju anya nke anụ ahụ dị nro, na njikọ njikọta, irighiri akwara na akwara ọbara, jikọtara ya na ụdị anụ ahụ atọ dị iche iche n'ime akụkụ ahụ na-arụ ọrụ. Dịka ihe nkọwa maka usoro a, ndị sayensị na-ejikarị incisor mouse, nke na-etolite oge niile ma na-agbanwe na ndụ anụmanụ niile.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na a mụọla incisor òké ahụ ọtụtụ mgbe na ọnọdụ mmepe, ọtụtụ ajụjụ gbara ọkpụrụkpụ gbasara mkpụrụ ndụ ezé dị iche iche, mkpụrụ ndụ mpi na ọdịiche ha na ike cellular ka ga-aza.
N'iji usoro mkpụrụ ndụ RNA nke otu mkpụrụ ndụ na nchọpụta mkpụrụ ndụ ihe nketa, ndị nchọpụta na Karolinska Institutet, Mahadum Medical nke Vienna dị na Austria na Mahadum Harvard dị na USA achọpụtala ugbu a ma mara mkpụrụ ndụ mmadụ niile na ezé ezé na ụmụ okorobịa na-eto eto ma na-eto eto. .
“Site na sel sel rue sel ndị okenye topụrụ iche dị iche iche, anyị nwere ike ịghọta ụzọ dị iche iche nke odontoblasts, nke na - eweta dentine - anụ ahụ siri ike nke dị nso na pulp - na ameloblasts, nke na - eweta enamel ahụ,” ka ihe ọmụmụ ikpeazụ ahụ kwuru onye edemede Igor Adameyko na Ngalaba Physiology na Pharmacology, Karolinska Institutet, yana onye na-ede akwụkwọ Kaj Fried na Ngalaba Neuroscience, Karolinska Institutet. Anyị chọpụtakwara ụdị sel ọhụrụ na akwa cell n'ime ezé nke nwere ike iso rụọ ọrụ n'echiche ezé. ”
Offọdụ n'ime nchọta ahụ nwekwara ike ịkọwa ụfọdụ akụkụ dị mgbagwoju anya nke usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ na ezé, ndị ọzọ na-enyekwa ọhụụ ọhụrụ na nhazi enamel ezé, anụ ahụ kachasị sie ike na ahụ anyị.
“Anyị nwere olile anya ma kwenye na ọrụ anyị nwere ike ịbụ ihe ndabere nke ụzọ dị ọhụrụ banyere ezé banyere echi. Kpọmkwem, ọ pụrụ ime ka ọrụ nke ezé na-amụba ngwa ngwa na-aga ngwa ngwa, usoro ọgwụgwọ nke usoro ọgwụgwọ maka iji dochie anụ ahụ mebiri emebi ma ọ bụ nke furu efu. ”
E meela ka nsonaazụ ahụ pụta n'ihu ọha n'ụdị mkparịta ụka mmekọrịta enyi na enyi na ezé mmadụ nwere ike ịchọ. Ndị ọrụ nyocha ahụ kwenyere na ha kwesịrị igosipụta uru bara uru ọ bụghị naanị maka ndị na-ahụ maka ezé eze kamakwa maka ndị nyocha nwere mmasị na mmepe na usoro nha azụ na izugbe.
Ihe ndi Karolinska Institutet nyere. Mara: Enwere ike dezie ọdịnaya maka ụdị na ogologo.